इँटामा छ इतिहास- विचार - कान्तिपुर समाचार
इँटामा छ इतिहास
सम्पदा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धारका क्रममा इतिहास बोकेका इँटाका टुक्रा काम नलाग्ने ठानिएका छन् । पुराना काठका खम्बालाई कुहाएर ढलान गरिएका छन् ।
माघ २४, २०७५ नीरज लवजू
काठमाडौँ — भक्तपुरको मल्लकालीन दरबारभित्र सानो पोखरी छ– दुमाजु पोखरी । पुरातत्त्व विभागले हालै पोखरी जीर्णोद्धार गर्‍यो । जीर्णोद्धारका क्रममा भेटिएका इँटा भुइँमा सोलिङ गर्न प्रयोग गरियो । मल्लकालीन पहिचान बोकेका ती इँटाको महत्त्व निर्माण ठेकेदार र निर्माण मजदुरलाई मतलब भएन । पुराना इँटा उनीहरूले भुइँ ढलानमा ‘सदुपयोग’ गरे ।
ऐतिहासिक सम्पदा सिमेन्टको लेपनले ध्वस्त भयो । दरबार क्षेत्रकै द्वारिकानाथ मन्दिरको पिँढीमा विभागले चारकुने इँटा बिछ्यायो । इँटा मान्छेले सजिलै उप्काउन मिल्नेगरी बिछ्याइएको भन्दै स्थानीय नगरपालिकाले आपत्ति जनायो । निर्माण मजदुरले मन्दिरकै काठका देवाकृतिमा ह्वाइट सिमेन्टले पोते । यसले युगौं पुरानो सम्पदा कुरूपमात्र देखिएन, पहिलेको आकृतिमा नफर्कनेगरी बिग्रियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरका दरबार क्षेत्रभित्र २०७२ सालको भूकम्पबाट भत्केका सम्पदाको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार भइरहेको छ । पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको गति सुस्त छ । त्यसभन्दा बढी चिन्ताको विषय सम्पदा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धारमा लापरबाही हो ।
सम्पदा क्षेत्र देशको इतिहास र सम्पत्ति हो । लाखौं पर्यटक काठमाडौं उपत्यकामा कंक्रिट जड्डल होइन, मल्लकालीन सम्पदा हेर्न आउने हुन् । त्यसकारण ती सम्पदा हाम्रो इतिहासमात्र नभई अर्थोपार्जनका माध्यम पनि बनेका छन् । पुरानो युगले नयाँ युगको सेवा गर्छ भनेजस्तै ती ऐतिहासिक धरोहरले आजको पुस्ताको सेवा गरिरहेका छन् ।
सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा भएको लापरबाहीले मौलिकता र महत्त्वलाई होचो बनाइदिएको छ । पुरातत्त्व विभागले सम्पदा क्षेत्र जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणबारे अलग कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि बेवास्ता गर्दै कसैको निजी ढलान घर बनाए जस्तो सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गर्न खोजिएको छ ।
इतिहास स–साना इँटाका टुक्रा र आकृतिमा लुकेर बसेको हुन्छ । काठका साना टुक्रा र फालिएका मसिना ढुड्डामा संस्कृति र इतिहासको बास हुनसक्छ । त्यो इतिहास र संस्कृति देख्न ज्ञान र अध्ययन आवश्यक हुन्छ । चीनको सियान प्रान्तको लिनतोङ जिल्लामा भेटिएको टेराकोट्टा आर्मी स्थानीय केही किसानले इनार खन्ने क्रममा सन् १९७४ मा फेला पारेका थिए ।
अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो चीनका प्रथम सम्राटको चिहान भएको पत्ता लाग्यो । ईसापूर्व २१०–२०९ बीच गाडिएको सम्राट छिनसी ह्वानको चिहानमा ती सैनिक आकृतिहरू पनि गाडिएको भेटियो । इनार खन्दा चिनियाँ सभ्यताको त्यो अनुपम इतिहास पत्ता लाग्यो ।
हाम्रै कपिलवस्तुको बुद्धकालीन दरबार पत्ता लागेको इतिहास पनि त्योभन्दा धेरै फरक छैन । पुरातत्त्व अध्ययनका लागि जमिनमुनि, निर्जन जड्डलभित्र नयाँ आविष्कारका अथाह सम्भावना लुकेका हुन्छन् । सुर्खेत जिल्लाको काँक्रेविहार दस वर्ष अघिसम्म जड्डलमा फालिएका ढुड्डा बाहेक केही थिएन । आज त्यहीं ऐतिहासिक धरोहर बन्दैछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका प्रत्येक सम्पदा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार गर्दा त्यस्ता नउघारिएका कैयौं पाटा सतहमा आउने सम्भावना नकार्न सकिन्न । अर्कोतिर अहिले रहेका सम्पदाको संरक्षण अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । युगौं पुरानो सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार केही निर्माण मजदुरको जिम्मामा मात्र छोडिंँदा नयाँ खोजको सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ । भएका सम्पदासमेत कुरूप र महत्त्वहीन बन्छन् ।
सम्पदाको पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धारलाई अरू सामान्य भौतिक निर्माणजस्तै ठेकेदारको भरमा मात्र छाड्ने गल्ती गर्नुहुन्न । इतिहासविद्, पुरातत्त्वविद् आदि विज्ञहरू समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता र अनुगमनमा सम्पदा पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ । अझ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका अध्येता र विद्यार्थी समेतको संलग्नतामा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नसके भविष्यका लागिसमेत विचार गरेको ठहरिनेछ ।
सम्पदा पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धारमा उपलब्ध भएसम्म रैथाने जनशक्ति प्रयोग र परिचालन आवश्यक छ । सम्पदासँग जोडिएको समुदाय र संस्कृतिका अनुयायीलाई यसको सम्भारमा परिचालन गर्नसक्दा स्थानीयले स्वामित्वबोध गरी संरक्षण हुन जान्छ । तर यतिबेला विशेषत: पुरातत्त्व विभागमार्फत ठेक्कामा दिइएका पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार कार्यमा सम्पदाको महत्त्वबारे जानकारी नभएका र कहीं कतै पनि नजोडिएका जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
न तिनले आफूले बनाउँदै गरेको सम्पदाप्रति संवेदनशीलता देखाउन सकेका छन्, न स्थानीय बासिन्दाले त्यसप्रति स्वामित्वबोध गरेका छन् । कतिपय सम्पदा जीर्णोद्धारमा स्थानीय बासिन्दा र ठेकेदारबीच द्वन्द्वसमेत भएका छन् । ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा रैथानेले विरोध गरेका घटना पनि छन् । पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार कार्यमा विज्ञ जनशक्तिको अनुगमन नहुँदा इतिहास बोकेका इँटाका टुक्रा ‘काम नलाग्ने’ ठानिएका छन् । पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका काठका खम्बालाई बलेसीको पानीले कुहाएर ढलान गरिएका छन् ।
कतिपय सम्पदा क्षेत्र रक्षाका लागि तैनाथ प्रहरीले पुरातात्त्विक महत्त्वका काठ बाल्नेसमेत गरेका छन् । ऐतिहासिक खोजको सम्भावनाको दूरभविष्यबारे जानकारी नभएका निर्माण मजदुर, ठेकेदार वा सुरक्षाकर्मीलाई यसका निम्ति दोषारोपण गर्नुभन्दा सरकारी निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ ।
सम्पदा संरक्षण (पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार) का निम्ति अर्को चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदै जानु हो । इँटा बिछ्याएको बाटो बनाउने, झिंगटीले छाना छाउने, मन्दिरको गारो बनाउने आदि सीप जान्ने मानिस कम हुँदै गएका छन् । सिपालु मानिस नहुँदा अर्धदक्ष र अदक्ष मानिसलाई कामको जिम्मा लगाउनुपर्दा सम्पदा जीर्णोद्धारमा खेलाँची वा अपूर्णता हुने गरेको छ ।
पुरातत्त्व विभाग, विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी आदि जिम्मेवारी निकायले नियमित विशेष तालिम बन्दोबस्त गर्नसके पुर्खाले जानेको सीप क्रमश: पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जानेछ । तालिम प्राप्त मजदुरलाई नै त्यस्ता काममा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहले पनि यसमा अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।
सम्पदा जीर्णोद्धारका लागि सामग्री अभाव पनि आगामी दिनको चुनौती हुनेछ । झिंगटी, कलात्मक तोरण, बुट्टाइँटा, काष्ठकला आदिको उत्पादनबिना पुराना सम्पदाको मौलिकता जोगाउन सकिन्न । तर ती सामग्री उत्पादन गर्ने सिपालु मानिस र उद्योग क्रमश: कम हुँदै गएका छन् । अधिकांश मन्दिरमा रहेका काष्ठकला र बुट्टाको आफ्नै मिथक र किंवदन्ती हुन्छन् ।
खोजिपस्दा तिनमा इतिहास भेटिन्छ, तत्कालीन समाजको प्रतिविम्ब भेटिन्छन् । काष्ठकला, धातुकला र बुट्टेदार इँटा बनाउने कर्मीलाई तिनका बारे जानकारी दिन नसक्दा किंवदन्ती लोप हुँदै जान्छ । अध्येताको अध्ययन किताबको पानाबाट बाहिर ती कर्मीसम्म पनि कसरी पुर्‍याउने हो, ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । ठेकेदारीमा सम्पदा निर्माण र जीर्णोद्धार गरिनु झारा टार्नु हो, सम्पदाको आत्मा मार्नु हो ।
सयौं वर्षअघि बनेका सम्पदाको मौलिकता जोगाउनुपर्छ । मौलिकता हाम्रो परिचय हो, सम्पत्ति हो । यसमा लापरबाही गर्ने छुट कसैलाई छैन । नजाने जान्न सकिन्छ, तर अल्पज्ञानमा चुनौतीको समाधान खोजी गर्नु बुद्धिमानी होइन ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:१३
इतर विचारका कलाकार
आज भारत हिन्दुवादी संगठनको तखतमा चल्दा सीमान्तकृत गैरहिन्दु समुदाय चेपुवामा परेका छन् । राज्यसत्ताकै संरक्षणमा आज असहिष्णुताको राजनीति संस्थागत र मूलप्रवाहीकरण भइरहेको छ ।
पुस २१, २०७५ नीरज लवजू
काठमाडौँ — बलिउड कलाकार नसिरुद्दिन शाह नेपालमा पनि चिनिएकै कलाकार हुन् । दिल्लीस्थित नेसनल स्कुल अफ ड्रामाका विद्यार्थी शाह रंगमञ्चबाट बलिउडमा स्थापित कलाकारमध्ये अग्रस्थानमा गनिन्छन् । नेपालकै रंगकर्मी सुनिल पोखरेलसँग जोडिएर उनको नाम बेला–बेला नेपालका पत्रपत्रिका आउने गरेको छ ।
गएको डिसेम्बर १७ मा उनै नसिरुद्दिन शाहले अनलाइन भिडियोमार्फत प्रसारित अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्ति भारतमा चर्चाको विषय बनेको छ । डिसेम्बर ३ मा नसिरुद्दिनको जन्म भएको भारतको उत्तर प्रदेशको बुलन्दसर जिल्लामा भएको हुलदंगाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘विष चारैतिर फैलिसकेको छ । कानुन हातमा लिनेको लागि यो पुरै दण्डहीनताको अवस्था बनेको छ । धेरै क्षेत्रमा हामी देख्दैछौं– एकजना प्रहरी अफिसरको मृत्युभन्दा एउटा गाईको मृत्युलाई बढी महत्त्व दिइँदैछ ।’
बुलन्दसरमा के भएको थियो ?
डिसेम्बर ३ को दिन उत्तर प्रदेशको बुलन्दसर जिल्लास्थित महाज गाउँमा बिहान ११:०० बजेतिर स्थानीय एउटा खुला चौरमा गाई र बाछाको सिनो भेटियो । गाउँलेहरूले त्यसबारे प्रहरीसमक्ष उजुरी गरे । प्रहरीले आवश्यक छानबिन गर्ने आश्वासन दियो । तर गाउँलेहरूले सिनो ट्र्याक्टरमा राखेर बुलन्दसर–गढ राजमार्ग नै अवरोध गरेर प्रदर्शन गरे ।
प्रहरीले जब अवरुद्ध राजमार्ग खोल्ने प्रयास गरे, तब स्थानीय गाउँले र प्रहरीबीच भिडन्त चर्कियो । सोही क्रममा प्रहरी अफिसर सुबोधकुमार सिंहको मृत्यु भयो । उनलाई बायाँ आँखाको आँखीभौं छेउमा गोली लागेको थियो । भिडन्तको क्रममा प्रदर्शनकारीले केही गाडीमाथि तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी पनि गरेका थिए । सोही दिन सुमितकुमार नामका एकजना विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको थियो ।
त्यो दिन भिडको नेतृत्व हिन्दु अतिवादी बजरंग दलका नेता योगेश राजले गरेका थिए । उनीहरूले यसरी ‘गौमाता’को वध गर्नुमा स्थानीय अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको भूमिका भएको दाबी गरेका थिए । प्रहरीले गाई मारेको अभियोगमा केही मुसलमानहरूलाई गिरफ्तार पनि गरिसकेको छ ।
नसिरुद्दिनले के भने ?
सोही घटनाको सन्दर्भ जोडेर कलाकार नसिरुद्दिन शाहले कुनै दिन त्यस्तै हुलदंगामा आफ्ना केटाकेटीलाई ‘तिमीहरू कुन धर्म मान्छौ ?’ भनी सोधे, उनीहरूले के जवाफ दिने होलान् भनी आफूलाई पीर परेको बताएका थिए ।
आफूले धार्मिक शिक्षा पाए पनि आफ्ना केटाकेटीलाई कुनै प्रकारको धार्मिक शिक्षा नदिएको उनको भनाइ थियो । मानिस असल र खराब हुनुमा धर्मसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नभएकोमा आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै उनी र उनकी श्रीमती अर्का कलाकार रत्ना पाठकले केटाकेटीलाई कुनै पनि धार्मिक शिक्षा नदिने निर्णय गरेको भन्दै भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
सोही घटनालाई लिएर उत्तर प्रदेशका केही बुद्धिजीवीले त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको राजीनामा मागेपछि विशेषत: हिन्दुवादीहरू शाहमाथि खनिएका छन् । उत्तर प्रदेशको भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख आदित्यनाथले शाहलाई सोही अभिव्यक्तिका कारण ‘पाकिस्तानी एजेन्ट’को संज्ञा दिएका छन् ।
त्यस्तै पतञ्जलीका रामदेवले उनको सो भनाइलाई देशद्रोही अभिव्यक्ति भएको प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनको भनाइसँग जोडेर उठेको यो विवादका कारण २१ डिसेम्बरको दिन द अजमेर साहित्य महोत्सवमा नसिरुद्दिनले बोल्ने कार्यक्रम नै आयोजकले स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
नसिरुद्दिन पहिला होइनन्
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बलिउड कलाकारबारे दिएको आक्रामक टिप्पणी यो पहिलो भने होइन । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा उनले बलिउडका अर्का स्टार कलाकार शाहरूख खानलाई पाकिस्तानका आतंकवादी हाफिज साइडसँग तुलना गरेका थिए । शाहरूख खानले भारतीय समाज निकै असहिष्णु बन्दै गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा आदित्यनाथले मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड मानिएका हाफिजसँग शाहरूखको तुलना गरेका थिए ।
त्यत्तिबेला उनले यदि भारतका धेरै मानिसले शाहरूखका चलचित्र नहेरे उनी ‘सामान्य मुसलमान’ बनेर सडकमा यताउता भौंतारिनुपर्ने भनी रिस पोखेका थिए । भाजपाका अर्का नेता कैलाश विजयवर्गीयले पनि खानमाथि चर्को हमला गरेका थिए । उनले शृङ्खलाबद्ध रूपमा लेखेका ट्विटमा खानलाई ‘राष्ट्रियता विरोधी’ र ‘भारतमा बसे पनि आत्म पाकिस्तानमा भएको’ भनेका थिए ।
यस प्रकारका हमलामा परेका अर्का बलिउड कलाकार हुन्–आमिर खान । भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारको आलोचना गरेका कारण सन् २०१६ मा आमिरलाई ई–कमर्स कम्पनी स्न्यापडिलको ब्रान्ड एम्बेस्डरबाट निकालिएको थियो । आमिरको चलचित्र ‘पिके’मा हिन्दु देवतामाथि अपमान गरेको भन्दै भारतका हिन्दुवादीहरू उनीसँग रिसाएका थिए ।
अर्को एउटा अन्तर्वार्तामा आफ्नो पत्नी किरण रावले भारतमा बस्न असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘आमिर भारत छोड्ने तयारीमा’ भन्ने हल्लाबाजी गरी उनको र किरणको चर्को आलोचना भएका थिए । बलिउडकै कतिपय नाम चलेका कलाकारले समेत उनको खेदो खनेका थिए । आफ्ना मनसाय त्यस्तो नभएको कुरा सबैलाई बुझाउन आमिरलाई हम्मे परेको थियो ।
सन् २०१५ को नोभेम्बरमा आयोजित रामनाथ गोयन्का पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा आमिरले असहिष्णुताका घटनाको जमेर विरोध गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई भाजपा नेता–कार्यकर्ताले सरकार र हिन्दु धर्मको विरोधको रूपमा बुझेका थिए वा कम्तीमा त्यसरी प्रचार गरेका थिए ।
भारतमा बढ्दो असहिष्णुताप्रति विरोध जनाउँदै सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कार बहिस्कार गर्ने चलचित्रकर्मी, प्राज्ञ, इतिहासकार र कलाकारको निर्णयलाई उनले पनि समर्थन जनाएका थिए । ‘म अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्छु । विरोध प्रदर्शन अहिंसात्मक भएसम्म जोकोहीलाई पनि त्यस्तो प्रदर्शनप्रति समर्थन गर्ने अधिकार छ ।’
असहिष्णु बन्दै भारत
सन् २०१४ मा भारी बहुमतका साथ भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी ‘संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश’का प्रधानमन्त्री बने । भारतमा धार्मिक दंगा र विवाद नयाँ कुरा होइन । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजन नै धर्मको आधारमा भएको थियो । बेलायती उपनिवेशले छोडेको यो विग्रहको वीउ अझै नष्ट भइसकेको छैन ।
भारतका सबैजसो प्रदेशमा कुनै न कुनै आकार र प्रकृतिका धार्मिक द्वन्द्व आज पनि छन् । तर विशेषत: हिन्दुवादको पृष्ठभूमिबाट आएका मोदी बलियो राजनीतिक शक्तिका साथ प्रधानमन्त्री बनेपछि हिन्दु अतिवादले फेरि सक्रिय हुने मौका पाइरहेको छ । धर्म, विचार, समुदाय आदि परम्परागत आधारमा भारतीय समाज क्रमश: अझ असहिष्णु बन्दै गएको मोदी प्रधानमन्त्री बने यताका धेरै घटनाले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
त्यहाँका मुसलमान, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायदेखि प्रगतिशील वा प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने बुद्धिजीवीसम्म यो असहिष्णु राजनीतिको कोपभाजनमा परेका छन् । ‘अर्बन नक्सालाइट’ (सहरिया नक्सालबाडी) देखि केरला बाढीमा भएको पक्षपातसम्मका घटनालाई भिन्न मतमाथि दमन गर्ने मोदी र भाजपा सरकारको नीतिको रूपमा विश्लेषण गरिन्छ ।
जेएनयुमा भएको दमनदेखि हैदरावाद विश्वविद्यालयमा रोहित भेमुलाको आत्महत्या, पत्रकार गौरी लंकेशको हत्यासम्मका घटना धार्मिक अतिवाद र असहिष्णुताका शृंखला हुन् । हालै भारतको सङ्घीय सरकारले रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (र) लगायत दसवटा सरकारी निकायलाई भारतभरिका कुनै पनि कम्प्युटर वा विद्युत्तीय सामग्रीमाथि निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । यसलाई भारत क्रमश: पुलिस स्टेट बन्दै गएको अर्को प्रमाणको रूपमा लिइएको छ ।
धार्मिक असहिष्णुतालाई राज्य स्वयम्ले संरक्षण दिंँदा राज्यका सुरक्षा निकाय पंगु बनेका छन् । आज भारत हिन्दुवादी संगठनको तखतमा चल्दा सीमान्तकृत गैरहिन्दु समुदाय चेपुवा परेका छन् । राज्यसत्ताकै संरक्षणमा आज असहिष्णुताको राजनीति संस्थागत र मूलप्रवाहीकरण भइरहेको छ ।
भारतीय राजनीतिको सबैभन्दा तीव्र प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको इतिहासले सावित गरेको विषय हो । छिमेकी देश, खुला सिमाना, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक एवं धार्मिक समानता आदि धेरै कारणले भारतको प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको छ ।
अहिले हिन्दुवादी लहरको अलि बढी प्रभाव भारतका उत्तरी प्रदेशमा बढ्ता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय हिन्दुवादी राजनीतिक प्रभाव नेपालसम्म आउन गार्‍हो कुरा होइन । नेपालकै राजनीतिमा पछिल्लो चर्चाको विषयमा रहेको हिन्दु राज्यको मुद्दा उठान कुनै न कुनै रूपमा यसबाट प्रभावित रहेको प्रस्ट छ ।
तर साँच्चै नेपाली समाजले आज भारतीयअल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायले भोगिरहेको जस्तो राज्य प्रायोजित असहिष्णुता भोग्नुपरे अवस्था कस्तो होला ? त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै पूर्वसावधानी नेपाली जनताको सचेततामा भर पर्ने कुरा हो ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:५७